Chad: Haweeney reer Kamikaze ah ayaa dishay lix qof galbeedka waddanka - JeuneAfrique.com -
ACCUEIL » SIYAASADDA Chad: Haweeney reer Kamikaze ah ayaa dishay lix qof galbeedka waddanka - JeuneAfrique.com
Chad: Haweeney reer Kamikaze ah ayaa dishay lix qof galbeedka waddanka - JeuneAfrique.com
Lix qof ayaa lagu dilay weerar ay fuliyeen habeenimadii Talaadada ilaa Arbacadii ee 14 oo ay haweeney kamikaze ah oo xiriir la leh Boko Haram galbeedka Chad, ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidamada Chad.
"Qiyaastii hal saac oo aroortii hore, qof isqarxiyay oo xubin ka ah kooxda Boko Haram, ayaa galay barxadda madaxa Tatafiromou, halkaas oo ay ku tuurtay dacwaddeeda ah inay dishay dadka 6, oo uu ku jiro askari," ayuu yidhi sarkaalkan sarsare ee sarsare. ciidanka Chadian oo qarsoon.
Is-miidaaminta ismiidaaminta ah ayaa ka dhacday xaafada Kaïga-Kindiya, oo ku taal gobolka harada, halkaas oo kooxda jihaadiyiinta ahi ay kordhiyeen weerarada tan iyo bilowgii sanadka.
Ciidamada Chadian gaar ahaan waa la bartilmaameedsaday
Weerarka ayaa dhaliyay dhowr dhaawac, sida uu sheegay sarkaalka ciidamada, oo aan sheegi karin tirada. Warbixinta weerarka ayaa waxaa xaqiijiyay madaxa NGO maxalliga ah, kaasoo sidoo kale doorbiday inuu qarsoodi ku noqdo sababo amni awgood.
Tan iyo Juun 2018, gobolka harada Lake Chad waa goobta weerarada ka soo cusboonaadeen Boko Haram. Intooda badan loogu talagalay jagooyinka ciidamada Chadian.
Dhamaadkii bishii March, Askarta 23 ee reer Chadian ayaa lagu diley weerarka saldhig horumarsan oo ku yaal xeebta waqooyi-bari ee harada. Weerar kale oo Boko Xaraam dhacay bishii Juun 21 ayaa sidoo kale sababay dhimashada ugu yaraan askar katirsan 11 Chadian.
Niger: afar askari ayaa lagu diley aaladda waxyaabaha qarxa ee gobolka Diffa - JeuneAfrique.com
Tunisiya - Basma Khalfaoui: "Khilaafka lacagta ayaa ah caqabadda ugu weyn ee laga hor tagi karo" - JeuneAfrique.com